Chakavanzika chaKristu. BNL Ministries - sn00
Dai taingoziva izvo zvinorehwa neGwaro izvi: “ari mamuri mukuru kuna iye ari munyika.” Tinoziva kuti ichokwadi, asi isu havanyatsozvinzwisisi nayo. Chii chiri mauri icho chikuru? NdiKristu, vakazodzwa! Mwari, vaive muna Kristu, vari mauri. Saka, kana ari mamuri, ipapo hausisiri kurarama zvakare, ndiye anogara mauri.
Genesisi 14 inotaura kuti guta reSodhoma yakanga yakapamba namambo weEramu (Persia). Roti nemukadzi wake nevana vakabatwa ndokutakurwa kuenda kuchamhembe. Abhurahama akaunganidza kurwisa uto 318 varume vaidzingirira mambo weEramu uye akamukunda pakurwa. Saka Abhurahama akanunura mwana wemunun'una wake Roti kubva muuranda. Pashure pehondo, mupristi ainzi Merikizedheki akauya kuna Abhurahama, akamuropafadza, uye akadya chingwa uye akanwa waini naye. In dzoka, Abhurahama akabhadhara chegumi kuna Merikizedheki vachimupa chegumi chezvose zvaakanga anazvo.
Nyaya iyi yaizova shamisa zvakakwana chete kubva mubhuku raGenesisi, asi muna Vahebheru 7 Pauro anonyora kuti Merikizedeki ndimambo werunyararo nekururama, uye haana kuva baba kana mai, kana kutanga kana kuguma kwemazuva. Ndiani uyu munhu asinganzwisisike? Hama Branham vakatsanangura kuti Merikizedheki aifanira kuve Mwari amene, nekuti chete Mwari haana paakatangira. Merikizedheki aive Mwari theophany anozviratidza kuna Abhurahama kuitira kumiririra Jesu Kristu. Yakanga isiri Jesu isu sezvatinomuona muTestamente Itsva, nekuti Jesu wakange ana baba naamai, uye murume uyu akange asina kana wavo. Jesu aive aine mavambo; murume uyu haana. Jesu akapa hupenyu hwake; murume uyu asingagoni, nekuti akange ari hupenyu.
Dhawunirodha (PDF Chirungu).
Hama yapedyo yomununuri.
Apo vashanduri vakanga vachiisa pamwechete mabhuku rinozivikanwa Bhaibheri wedu, anenge asiya kubva mubhuku raRute. Iyi inyaya yerudo, uye akanaka kwazvo, asi Mwari haana kutaurwa zvikuru. Ichi chaive chokwadi ichi chakavakonzera kusvika kuramba bhuku rino sezvo rakafuridzirwa. Zvisinei rine mu 'mhando' nyaya ane hama yapedyo yomununuri, Jesu Kristu ari hama yedu yepedyo uyo aikwanisa kubhadhara mutengo wokudzikinura Naomi, (anomiririra kereke yechiJuda) uye nokuita kudaro anowana Rute (Marudzi mwenga) uyo anomiririra kereke yechiKristu. Tenda Mwari kuti tine anodzikunura souyu. Paive nehama yepedyo (yedu yekare hunhu) vakasarudza kusadzikunura kuitira kuti murege kuva nekunyara kwevakaroora naRute. Izvi zvakasiya Bhoazi wedu (Kristu) akasununguka kudzikunura mwenga wake. Ichi ndicho chikonzero Kristu aifanira 'kuberekwa nemukadzi' kuitira kuti ave hama yapedyo yedu.
Dhawunirodha (PDF Chirungu) Kinsman Redeemer.
Mwari paakasika zvakasikwa, aive nechinangwa chakapetwa katatu mupfungwa. Kutanga, aida kuzvizivisa kuvanhu nekutaura hunhu hwake. Haana kugona kuita izvi sezvo Jehovha Mwari iye anofukidza nzvimbo yese, nguva, uye nekusingaperi. Ndiye saka zvakadzama uye asinganzwisisiki kuti hapana munhu aigona nokusingaperi kunzwisisa iye. Vanganzwisisa sei munhu anogara aripo? Saka, akataura sababa vake nokuva mwanakomana wemunhu. Ndosaka Jesu akazvidana kuti “Mwanakomana wemunhu.” Mwari aida kuzvizivisa nevanhu venyama Nokuzvizivisa muna Kristu.
Mwari aida kurarama mukati vanhu, uye saka ive nzvimbo yokutanga mumuviri wevatendi anodana mwenga wake. Pakutanga aigona kuita izvi muna Adhamu naEvha; asi zvivi zvakazovatsaura kubva pamberi pake. Sei Mwari vasina kungochengeta Adhamu naEvha vakachena? Kana akanga, aisazombowana vakaratidza ake azere zvaari. Iye akange ari mwanakomana, muponesi, uye muporesa, izvo zvaaigona chete kuratidza kuburikidza naKristu. Munoona? Zvinhu zvese zvakasungirirwa mumunhu iyeye, Jesu Kristu. Chinangwa chikuru cha Mwari chave kungogara achizviratidza - kutanga muna Kristu se "kuzara kwouMwari kunogara maari pamuviri,"; uyezve muvanhu vanozogashira Mweya Mutsvene waKristu. Ava chaiwo vanhu achaita Jesu Kristu kutanga muhupenyu hwavo. Kubva pakutanga Mwari akashanda asinganetsi kune chinangwa ichi saka anogona kukudzwa muvanhu ndiani achapa Jesu Kristu kutungamira; ndiko kuti, chinzvimbo kumusoro kana pamberi pevamwe vese.
Yetatu, chinangwa chaMwari ndechekudzosera humambo hwake shure mubindu reEdheni, kuitira kuti vanhu vake vafambe naye zvakare ari dzemanheru kwavekutonhorera, saAdhamu naEvha vakaita pamberi kuwa. Kuti izvi zvidaro, Mwari akaratidza pachake mumakore ese sababa, mwanakomana, uye Mweya Mutsvene. Baba uye Mweya Mutsvene ndiwo mweya iwoyo. Unowana here? Ivo havazi vamwari vatatu; ndiMwari mumwe achizvizivisa muhunhu hutatu. Mwari akaratidza pachake muna Jesu Kristu, aive baba, Mwanakomana, uye neMweya Mutsvene - “kuzara kwouMwari kunogara maari pamuviri.” Zvino, kuzara kweUmwari mumuviri anogara muchechi yake (mwenga wake), uye iye anomupa nzvimbo yokutanga. Zvese zvaive Mwari, akazvidurura muna Kristu; uye zvese izvo Kristu iye anodurura pasi muna chechi yake. (munhu vatendi.)
Jesu izwi rakataurwa kuberekwa.
Jesu aive mwana aitaura-izwi. Iye akange asina pamuviri kubudikidza pabonde chiito, asi kuburikidza neshoko rinotaurwa naMwari. (Mukati medumbu raMariya Mwari akasika zvose zai uye urume kuti nourume kuti zai, saka genetic aive munhu azere, asi parentage yake yakanga zvachose naMwari.) Sezvo haana kuuya kuburikidza pabonde, Jesu aisafanirwa kufa; asi akafa kuti abhadhare chikwereti chechivi chaAdhama. Ndiyo chete nzira yaingave yakabhadharwa. Hapana mumwe angagona kuzviita nekuti munhu wese akazvarwa pabonde. SaMariya, vanhu avo vakafanogadzwa kuva chikamu chemwenga wakabatanidzwa waJesu Kristu vachatanga kugamuchira izwi mudumbu rekufunga kwavo.
Dhawunirodha (PDF Chirungu) Mary's Belief
Kune marudzi maviri echivi.
Kunyepa, kuba, kuponda etc, zvivi zve “kutumirwa.”
Zvinhu vanhu vaite.
Chivi chikuru, zvisinei, zvivi zvekusiiwa, uko vanhu HAVANA kuita chimwe chinhu.
Vanhu vakanaka, vanofunga, “ndararama upenyu hwakanaka... Handina kuita chivi... Zvirokwazvo Mwari achandigamuchira?”
Asi chii havana kuita kwaiva kugamuchira Gods chipo cheruponeso vakasununguka, kuburikidza naJesu Kristu kufa kwavari. Uye vanoita izvi nekuda kwekusatenda.
Chivi chikuru chiri Kusatenda.
Mwari vane zita chairo.
Mwari anonzi ani?
Zviri pachena kuti Mwari ane zita chairo. Mapisarema 9:10,
Vanoziva zita renyu vachavimba nemi, nokuti imi, Jehovha hamuna kumbosiya avo vanokutsvakai.
Ngavazive kuti imi, mune zita rinonzi Jehovha, ndimi moga Wokumusoro-soro ari pamusoro penyika yose.
[Onawo Isaya 42:8, Isaya 54:5]
Zvinorehwa nezveZita rake ndezvekuti “Iye anoita kuti Kuve.”
Vadzidzi vechihebheru vairemekedza kudaro zita raMwari, vakabvisa mavhawero ese kuitira kuti irege kukwanisa kutaurwa. Nekudaro hapana mumwe aikwanisa “Kutora zita Rake pasina.”
Izvi vakasiya mavara mana “YHWH”, izvo chete 'zvinomiririra' zita raMwari. (Vamwe vanhu vanoshandisa “JHVH” kune izvi, kunyange izvi zvisiri izvo.) Iri boka remavara anonzi “Tetragrammaton”, izvo, muchiGreek zvinoreva “mavara mana”.
Mavara echiHebheru ezwi rinoti “Adonay” zvinoreva kuti “Ishe wangu”, dzakange dzakasanganiswa neaya mavara kuita izwi rekuti “Jehovha”. Hazvizivikanwe kuti mavhawero api ainyatso shandiswa. Rangarira zvakare kuti muchiHebheru, hapana tsamba 'J'.
MuChirungu King James Version yeBhaibheri, izwi rekuti “Jehovha” kana “ISHE” rinoshandiswa uko Tetragrammaton yakaitika. Izvi zvinoitika zvinoda kusvika zviuru zvinomwe zveBhaibheri mukati meBhaibheri rese. [Izwi rekuti "Ishe", riine mavara madiki, chinhu zvakasiyana shoko.] Izwi rekuti Jehovha, nokudaro chiRungu 'kumiririrwa' chezita Rake.
Ini handizive chero gwaro [mipumburu, kana kunyora piritsi, pottery nezvimwewo] yeiyo Testamende Yekare nguva, izvo zvinoratidza zita rizere raMwari. Ivo vanongoratidza tetragrammaton.
Sezvo mhinduro kumubvunzo wedu ipapo, inofanira kubva ku SHOKO; Tinotendeukira kuTestamente Itsva.
Mutumwa aitaura naMariya akati munaRuka 1:31,
Uchava nomwana uye uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rokuti Jesu.
Muna Mateo chitsauko 1 ndima 21-23, tinowana kuti Jesu anonzi “Emanueri” izvo zvinoreva kuti “Mwari anesu”.
21 Achava nomwana mukomana wauchazotumidza zita rokuti Jesu nokuti ndiye achaponesa vanhu vake kubva muzvivi zvavo.”
22 Izvi zvose zvakaitika kuti zvizadzise zvakanga zvataurwa naIshe kubudikidza nomuprofita wake zvokuti:
23 “Mhandara ichava napamuviri, igozvara mwana mukomana, uye vachamutumidza zita rokuti Emanueri, zvichireva kuti, ‘Mwari anesu.’”
“Jesus” [Jesu] izita rechirungu raIshe wedu.
MuchiGiriki zvinonzi “Iesous”.
MuchiHebheru, zita rake rakatumidzwa kuti “Yehohshua”.
MunaZvakazarurwa chitsauko 1, Johani ane chiratidzo chaJesu akamuka. Uyu ndowa “Mwanakomana wemunhu” (ndima 13) uye Jesu aiti kuna Johani, “Ini ndiri Arfa naOmega” (ndima 8) [uyezve muChirungu KJV, ndima 11], “wekutanga newekupedzisira”, “Wemasimbaose” uye zvinoratidza kuti Iye ndiMwari zvakajeka. “Akanga afa, asi ari mupenyu nokusingaperi” bvudzi rake jena, kwete nokuti vakwegura, asi nekuti ndiye Mutongi.
Evhangeri yaJohani hunotanga nemashoko aya, Johani 1:1-3,
1 Pakutanga pakanga pane Shoko, uye Shoko rakanga riri kuna Mwari, uye Shoko rakanga riri Mwari.
2 Iye aiva kuna Mwari kubva pakutanga.
3 Zvinhu zvose zvakaitwa kubudikidza naye; kunze kwake hakuna kana chinhu chakaitwa pane izvo zvakaitwa.
Ndima 14 inoenderera...
Shoko rakava nyama uye rakagara pakati pedu. Takaona kubwinya kwake, kubwinya kwaIye Mumwe Oga, akabva kuna Baba, azere nenyasha uye nechokwadi.
Pano tinoona mamwe mazita aJesu, “musiki” uye “shoko” uye “akaberekwa ari mumwe chete waBaba.”
Isaya akaporofita nezvaMesiya anouya muna Isaya 9:6. Muchiporofita ichi Isaya anopa Mesia mazita "Baba Vokusingaperi" uye "Mwari ane simba,".
Nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana, uye umambo huchava pamapfudzi ake. Uye achanzi Gota Rinoshamisa, Mwari Ane Simba, Baba Vokusingaperi, Muchinda woRugare.
Chirungu nhau yepamhepo webhusaiti.
Mwari neSainzi Index.
Kubvutwa kuri kuuya.
Dzimwe dzidziso huru.
Jesu akafira zvivi zvako.
Shekinah kubwinya kwaMwari.
Guva harina chinhu.
Yakanga iri apuro?
chakavanzika chakanga chakavigwa kubvira kare uye kumarudzi namarudzi, asi zvino zvakazarurirwa vatsvene.
Kwavari, Mwari akasarudza kuti azivise pakati pavaHedheni, pfuma inobwinya yechakavanzika ichi, iye Kristu mamuri, tariro yokubwinya.
Dzvanya pane mufananidzo kuti utore pasi yakazara saizi kana PDF.
Megomo uye rose
gwenzi mu chando
Kristu. Iye Ari Mukenduru yegoridhe.
Humambo hutatu hwemurume.
Anonditungamirira pamvura inozorodza.
Munguva dzamanheru ichava chiedza.
Meseji Hub...Sarudza mutauro wako uye dhawunirodha mameseji emahara kubva kuhama Branham.
Kangamwirai henyu yangu zvikanganiso rokushandura.
Kana Mukoma kana Sista vanogona kubatsira pamwe shanduro website yedu, ndapota andibate.
Iri peji rakagadzirwa neBNL Ministry.
Hama David Shearer